https://www.funneloftheday.com/ anotora wako zvakavanzika zvakakomba. This zvinhu zvemumwe anotsanangura chii zvemunhu isu kuunganidza uye sei tikarishandisa. Ona ichi zvinhu zvemumwe lähikuva kudzidza zvakawanda pamusoro voga mitemo zvavo.
Urongwa Information Collection
All servers dandemutande chamber mashoko anokosha pamusoro vashanyi zvavo. ruzivo urwu zvinosanganisira, asi hakungoitwi, IP kero, Browser mashoko, timestamps uye achitaura mapeji. Hapana mashoko aya anogona kuziva vashanyi yakananga pachake kuti nzvimbo iyi. Mashoko rinamakwapa kuti muitirowo Kutarisirwa nokuchengetedza zvinangwa.
Where zvakakodzera, https://www.funneloftheday.com/ anoshandisa Cookies kuchengeta mashoko mushanyi wacho zvaunofarira uye nhoroondo kuti vashumire zviri nani mushanyi uye / kana kuuya mushanyi pamwe customized kugutsikana.
Kudzora Privacy Your
Cherechedza kuti unogona kushandura rako Browser Kurongwa chokukuvadza mabhisikiti kana uine pasina zvaimunetsa. Waipedza Cookies nokuti nzvimbo dzose haisi ndaizoitwa zvingaita kuvhiringidza pakushandisa zvimwe nzvimbo. The yakanakisisa nzira iri chokukuvadza kana kuti macookie ari pa-nzvimbo hwaro. Bvunza wako Browser mapepa kuti mirayiridzo sei chaivharidzira Cookies nezvimwe Tracking zvigadziriswe. aya padandemutande Browser voga Kutarisira Links zvinogona kubatsira.
Concerns kana mibvunzo pamusoro ichi zvinhu zvemumwe inogona kuendeswa [email protected] kuti vawedzere kujekerwa.